Imagazini Ngokusekwe kwingcamango yokuhamba kunye nokufika kweli phephabhuku lebhodi lahlulwe ngokwamacandelo amabini: Ukuhamba / ukuza. Ukuhamba malunga nezixeko zaseYurophu, amava okuhamba kunye neengcebiso zokuya phesheya. Kubandakanya incwadi yokundwendwela yomntu odumeyo kuhlelo ngalunye. Ipasipoti "yeRiphabhlikhi yabahambi" inolwazi lobuqu malunga naloo mntu kunye nodliwanondlebe lwabo. Ukuza konke malunga nombono wokuba olona hambo lubuyela ekhaya. Ithetha malunga nokuhonjiswa kwasekhaya, ukupheka, imisebenzi enokwenza nosapho kunye namanqaku ukonwabela ikhaya lethu ngcono.
Ikhalenda I-ZOO yikhithi yokubhaliweyo ephepheni yokwenza izilwanyana ezintandathu, nganye ikhonza njengekhalenda eneenyanga ezimbini. Yiba nonyaka ozaliswe lulonwabo nge "zoo yakho encinci"! Ubomi boYilo: Uyilo lomgangatho lunamandla okutshintsha indawo nokuguqula iingqondo zabasebenzisi bayo. Banikezela ukuthuthuzela ukubona, ukubamba nokusebenzisa. Zixutywe kukukhanya kunye nenqaku lokumangaliswa, ukucebisa indawo. Iimveliso zethu zoqobo zenziwe kusetyenziswa umxholo "Wobomi ngoYilo".
Ifanitshala Etshintsha Indlela esigcina ngayo isithuba isisiseko, inezitulo ezibini ezifihlwe ngokupheleleyo ngaphakathi kwedrowa. Xa ubekwe ngaphakathi kwefanitshala ephambili, awuyi kuqaphela ukuba into ebonakala ngathi yeyokudonsa zizitulo ezimbini ezahlukeneyo. Unokuba nayo itheyibhile enokusetyenziswa njengedesika xa ikhutshiwe kwisakhiwo esingundoqo. Esona sakhiwo siqulathe iidrayi ezine kunye necandelo elingaphezulu kwekhawuni ephezulu apho ungagcina izinto ezininzi. Izinto eziphambili ezisetyenziselwa le fenitshala, i-eignalucus fingerjoint, inobuhlobo be-eco, inqabile ukumelana, inzima kwaye inesibheno esibonakalayo esinamandla.
Ikhalenda Idrowa, Isitulo Kunye Nedesika Combo Ingqokelela Yokujonga Imagazini Ikhalenda Ifanitshala Etshintsha